Render rekuti mamwe maAirPod angatarise sei mune rakasviba nhema | IPhone nhau
Chimwe chezvinhu zvitsva izvo Apple zvakatiratidza mune yekupedzisira kiyi yaive maAirPod, zvishandiso zvisina waya nemaawa mashanu ekuzvimiririra uye ayo anobhadhariswa kuburikidza nechigadziko, icho chinopa maawa makumi maviri nemana ekuenderera kwekushandisa kweaya mahedhifoni pasina tambo. Parizvino Apple yakangotipa ine modhi chena. Chimwe chinhu chitsva icho chakakosheswa nezwi rakakosheswa raive rakapenya dema uye matte dema ruvara rwemhando nyowani dze iPhone. Asi Iyo yakakwezva yakanyanya kutariswa yaive yakasviba nhema, ruvara runongowanikwa mune 128 uye 256 GB mamodheru.
Martin Hajek adzokera kubasa uye anotiratidza mamwe akashandurwa mamodheru eAirPod mune yakasviba nhema, ruvara rwatinogona kuona mumifananidzo yaakaburitsa. zvinotaridzika kunge zvakanaka pachinhu ichi. Ino inguva yekutanga kuti uyu mugadziri atiratidze pfungwa ye iPhone pazviitiko zvakapfuura. Zviri pachena kuti kufunga kwaMartin Hajek kunoratidzika kunge kuri kushomeka.
Dambudziko, sekureva kwaApple, rerudzi Glossy Nhema kana Jet nhema tinoiwana mune isina kupenya inopenya iyo michina inogadzirwa, chinyorwa chinonyanya kukakavara uye chinogona kukurumidza kuiswa mucherechedzo, saka iyo kambani pachayo inokurudzira kushandisa kavha kudzivirira ma micro-abrasions anogona kuitika nekuda kwekuenderera kwekushandisa.
Sezvatinogona kuona mumifananidzo inoenderana nechinyorwa ichi, tinogona kuona kuti bhokisi iro rinobvumidza kubhadharisa maAirPod uye mahedhifoni pachawo anotaridza kupenya nhema. kuratidza chitarisiko chinoshamisa kwazvo. Parizvino hatizive kana Apple iri kuda kuvhura ma-headphones asina waya mune rimwe ruvara kunze kwechena, asi parizvino hapana pekutangira chingaratidza zvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Render rekuti mamwe maAirPod angatarise sei mune rakasviba nhema
Apple inotarisira kutengesa mamirioni zana iPhone 100s muna 7